१२औँ तहमा बढुवाका लागि २१ जनाले दिए निवेदन, को-को हुँदैछन् बढुवा ?
आश्विन २४, २०७८ १७:०४ मा प्रकाशित
स्वास्थ्य सेवातर्फ १२औँ तहमा बढुवाका लागि निवेदन दिन म्याद आज सकिएको छ ।आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म बढुवाका लागि ११औँ तहका जनाले निवेदन दिएका छन् । २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका एघारौँ तहका अधिकृतहरूले बढुवाका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
अब बुढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवाको निर्णय गर्नेछ ।
११औँ तहको बरियतामा पहिलो नम्बरमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी हुनुहुन्छ । दोस्रोमा व्यवस्थापन महाशाखामा रहनुभएका डा‍ भीमसिंह तिंकरी, तेस्रो बरियतामा सार्क क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक रहेका डा. तारानाथ पोखरेल हुनुहुन्छ ।चौथोमा डा. तारानाथ पौडेल हुनहुुन्छ । पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा रिट दायर गरेकाले उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ ।
त्यसपछिको बरियतामा स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनीलराज शर्मा र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले बरियताकै आधारमा डा.गुणराज लोहनी, डा.भीसिंह तिंकरी र डा.तारानाथ पोखरेललाई बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बढुवा गरिएका ३ जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रालयमै जिम्मवारी दिने, एक जनालाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा र एक जनालाई वीर अस्पतालको निर्देशकको जिम्मवारी दिने तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार डा. तिंकरीलाई मन्त्रालयमै राख्ने, डा.लोहनीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र पोखरेललाई वीर अस्पतालको निर्देशकको जिम्मवारी दिने सम्भावना धेरै छ ।